Nagarik News - आर्यनलाई दुब्लाउन निर्देशन
12 May 2016 | 12:18pm
गत वर्ष रिलिज भएको फिल्म 'क्लासिक' हेरिसकेपछि अभिनेता आर्यन सिग्देललाई धेरैले सुझाव दिए, 'फिल्ममा तपाईं मोटो देखिनुभयो, अलि दुब्लाउनुपर्योा।' फिल्ममा उनको मोटोपना प्रष्ट झल्किन्थ्यो। त्यसैले आर्यन यतिबेला आफ्नो शरीर मेन्टेन गर्न निकै ध्यान दिइरहेका छन्।
हालै आयोजित एक फिल्मको प्रेसमिटमा आर्यन पहिलेभन्दा केही दुब्लो देखिए। कारण के हो त? पत्रकारको जिज्ञासामा आर्यन खुले, 'दिनेश दोस्तले दुब्लाउने निर्देशन दिएको छ। नयाँ फिल्ममा २२ वर्षे ठिटो देखिनुपर्ने रे।' बुझिएअनुसार निर्देशक दिनेश राउतले उनलाई दुब्लाएपछिमात्र फिल्मको कथा अघि बढाउने बताइरहेका छन्। 'नदुब्लाएर त कामै छैन। उ घट्दै पनि छ,' आर्यनको शरीरलाई लिएर निर्देशक राउतले प्रतिक्रियासमेत दिइसकेका छन्। आर्यन आफैँले निर्देशक राउतलाई लिएर नयाँ फिल्म बनाउने तयारी गरिरहेका हुन्। जसमा उनी जवान युवाको भूमिकामा देखिँदैछन्। आफैँ फिल्म बनाउने तयारीमा रहेका कारण अन्य ब्यानरका फिल्मको प्रस्तावसमेत आर्यनले अस्वीकार गरिरहेको बुझिएको छ।
« कलाकार संघले फान अवार्ड अायाेजना गर्ने को 'गुड किसर'? »